ဒတျချြအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(344 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ...နယ်သာလန်နိုင်ငံလောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားသည်။ တိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအခြားဥရောပနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိန်အများကြီးယူထားပြီးအဖြစ်နယ်သာလန်နိုင်ငံလောင်းကစားဝိုင်းဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေအတော်လေးတင်းကြပ်။ လက်ရှိတွင်အဆိုပါအော်ပရေတာဟော်လန်ကာစီနိုမှာတည်ရှိပါတယ်မြေယာ-based လောင်းကစားရုံများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကဒတ်ခ်ျ Zandvoort အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်သောအခါ, Mid-1970s နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အနှံ့ 14 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဟော်လန်ကာစီနိုအော်ပရေတာမကြာသေးမီကဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများကြုံတွေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းယခုရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွင်းလက်ဝါးကြီးအုပ်တင်းကြပ်စွာလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့သတိပြုပါ။ အဆိုပါဒတ်ခ်ျအစိုးရမှကျယ်ပြန့် 100 တထောင်ယူရို၏ပမာဏအတွက်ဒဏ်ငွေနှင့်အတူပုံပြင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့,
နှစ်နှစ်နယ်သာလန်အစိုးရအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏တရားဝင်အပေါ်ဥပဒေကြမ်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဇူလိုင်လ 7, 2016 ဇန်နဝါရီလ 1, 2017 အပေါ်အင်အားသုံးသို့ကြွတော်မူသောနယ်သာလန်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်တစ်ဦးဥပဒေ, မွေးစားခဲ့သည်။ အတော်များများကနိုင်ငံတကာလောင်းကစားအော်ပရေတာပြီးသားဂိမ်းဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်မတိုင်မီသို့သော်သူတို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလိုင်စင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လောင်းကစား Regulator (ဒတ်ချ်လောင်းကစားအာဏာပိုင် - Kansspelautoriteit, KSA) လုပ်ကွက်နယ်သာလန်အားလုံးကိုဆိုဒ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစား, လိုင်စင်မပါဘဲအလုပ်လုပ်နေသူ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်တွင်နှစ်ဦးစလုံးမြေပြင်အခြေစိုက်နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစား 29% တစ်မှုနှုန်းမှာအခွန်ကောက်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ထိပ်တန်း 10 ဒတျချြအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ဇန်နဝါရီလ 1 တွင်, 2017 အင်အားစုသို့နယ်သာလန်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခွင့်ပြုတဲ့ဥပဒေသစ်ရောက်လိမ့်မည်။ အပြည့်အဝလောင်းကစားဝိုင်း၏လယ်ပြင်တွင်ကန့်သတ်ထားဒတျချြနိုင်ငံသားများ, ယခုမသာနိုင်အိုးဆေးလိပ်သောက်, ဒါပေမယ့်လည်းအွန်လိုင်းအလောင်းအစားမှအခမဲ့ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံကအစိုးရမသာပြောင်းလဲသွားတယ်။ အထူးသဖြင့်, ပြင်ဆင်ချက်ဟော်လန်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဥပဒေများစေခဲ့သည်, တိုင်းပြည်များ၏ဥပဒေပြုတချို့ပြင်ဆင်ချက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဝန်ကြီးအဖွဲ့အမျိုးသားစီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သောနယ်သာလန်အတွက်ယခင်ကပိတ်ပင်ခဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား, တရားဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပိတျပငျများအတွက်အကြောင်းပြချက်ပြည်ပမှာတိုင်းပြည်ထဲကပိုက်ဆံယူပြီးကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပဲ။ သို့သျောလညျး, အွန်လိုင်းဂိမ်းများ၏အခြေချအတွက်အကျပ်အတည်းစတင်ခြင်းနှင့်တကွ, အာဏာပိုင်များခက်ခဲစီးပွားရေးအခြေအနေထဲကတစ်လမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟော်လန် - အခြားနိုင်ငံများတွင်ဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသောသောအရာအားလုံးကိုခွင့်ပြုသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ,
အဆိုပါနယ်သာလန်ပျော့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဖြစ်ကမ္ဘာအနှံ့လူသိများကြသည်။ ပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်စေရန်, အမ်စတာဒမ်အတွက်ခရီးသွားဧည့်ဒိန်ခဲကိုခံစားဖို့မသာလာ, မြက်ပင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်မှော်မှိုကိုစားမယ့်လမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်, ဒါပေမယ့်လည်းဥပဒေရေးရာယူပါ။ သာနယ်သာလန်အတွက်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းပြည်နယ်အဆင့်မှာတရားဝင်ကြောင့်တစ်ဦးကလမ်းပေါ်မှအနီရောင်အလင်းခရိုင်, အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးသောမြို့တော်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ထိုအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ပုံကအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှဖြစ်သည့်အတွက်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လောင်းကစားဝိုင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံများစာရင်းတွင်မှတရားဝင်ပူးပေါင်းနှင့်ဟော်လန်။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံနှင့်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ကစားရန်အခွင့်အလမ်းဒတျချြတွင်ထင်ရှား။ ,
on-line ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံလောင်းကစား - ကဖြစ်သကဲ့သို့ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်
အဆိုပါနယ်သာလန်အစိုးရအတိတ်နှစ်နှစ်တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားဝင်ဖို့ဥပဒေပြဌာန်းအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ထိုအချိန်ကကနိုင်ငံတွင်းရှိတစ်ခုလုံးကိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က, သာအွန်လိုင်းထီခွင့်ပြုခဲ့အဖြစ်ပိတ်ပင်မှုပြင်ပနှင့်နယ်သာလန်အတွက်အားကစားအပေါ်အလောင်းအစားကြ၏။ ထို့ကြောင့်, နယ်သာလန်လူဦးရေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းနိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်စွာရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်မကြာသေးမီကကနယ်သာလန်အစိုးရကကွန်ယက်တွင်လောင်းကစားဝိုင်းတရားဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီလ၏အစကတည်းကအမည်ရ7ဇူလိုင်လ, ပါလီမန်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတရားဝင်ဖို့ဥပဒေကြမ်းလွန်။ သို့သော်လောင်းကစားသမားတွေနှင့်အွန်လိုင်းနှုန်းထားများအနည်းငယ်ပိုသည်းခံခြင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ် - ပညတ္တိကျမ်းလာမယ့်နှစ်တိုင်အောင်အင်အားစုသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလွတ်လပ်ခွင့်များကိုအစိုးရကများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ပညာမဲ့ဖြစ်ဆဲအချို့န့်အသတ်ရှိပါတယ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာဥပဒကိုမဆိုအွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုများမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အသုံးပြုမှုရုံးများထီအော်ပရေတာအဖြစ်မြေပြင်အခြေစိုက်လောင်းကစားထူထောင်မှုတားမြစ်ထားကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ထား။ ဒါ့အပြင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားကြော်ငြာပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်အဝလွှဲများတွင်ဥရောပခရီးစဉ်နှင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလွတ်လပ်မှု, တောက်ပ tulips နှငျ့ဆေးခြောက်တစ်ပွညျ၌တည်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပိုင်ခွင့်ကိုဖတ်ပြီးကျနော်တို့နယ်သာလန်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြည်နယ်၏စီးပှားရေး၏လောင်းကစားရုံတစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်အတွက်ခွင့်ပြုသည်ဟုမထင်ကြဘူး။ အဘယ်သူမျှမပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုများကိုတရားမဝင်လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပပျောက်ရေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒီကျနော်တို့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲလျှို့ဝှက်လောင်းကစားရုံများ၏စီစဉ်ချွေးတပ်စခန်းမှစေလွှတ်ခဲ့သည်ကြောင်းမှတ်မိဘယ်မှာနာဇီဂျာမဏီ, မနိုင်။ ထိုအဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်ဟောင်းနွမ်းဥရောပအခြားသူများပြီးနောက်လစ်ဘရယ်ဟော်လန်၏တန်ခိုးနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ။
အဲဒီမှာပထမဦးဆုံးလောင်းကစားအိမ်သူအိမ်သား 1976 မိုင်အမ်စတာဒမ်ကနေတည်ရှိပြီး, Zandvoort ၏မြို့မှာ 20 သာထင်ရှား။ , မကြာခင်မှာပဲနှစ်ခုထက်ပိုသောကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ရန်, slot ကစက်တွေခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်နေသော်လည်းကပြစ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအဝေးလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအသေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ဟန်များနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမှအနီးကပ်အပန်းဖြေစခန်းဧရိယာများတွင်လုပ်လက်လှမ်းမမီပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးများနေဆဲမြေအောက်တွင်းနှင့်အတူထုပ်ပိုးကျခံနေရပါသည်။
ထိုအခါရိုတာဒမ်၏မြို့တော်ဝန်သူ့မြို့မှာရှိတဲ့လောင်းကစားရုံခွင့်ပြုပါရန်အစိုးရမှမေတ္တာရပ်ခံ။ မြို့တော်ဝန်သည်လောင်းကစားရုံအပန်းဖြေပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မရော့တာဒမ်ထံမှအနီးဆုံးလောင်းကစားရုံတစ်နာရီရဲ့ drive ကိုအခိုင်အမာ - မသက်မသာ, နှင့်လောင်းကစားရုံ၏အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရကစဉ်းစားရန်စတင်ခဲ့ခြင်း, မြူနီစီပယ်ရန်မေးခွန်းလွှာစလှေတျတျောအပေါငျးတို့ 35 အုပ်ချုပ်ရေးမှုးမြို့များကာစီနိုလောင်းကစားရုံများဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင်းတုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အခုတော့ဟော်လန် 14 လောင်းကစားဝိုင်းစင်တာများရာ 69,000 45 ငွေသားဆု 800 slot ကစက်တွေ, installed ရှိပါတယ်။ သို့သော်စက်ခက်ခဲတဲ့ဥပဒေပြဌာန်း, ဒါပေမယ့်လည်းကစားနည်းနဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့၏အရွယ်အစားသာမကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံးနှုန်းမှာ - 20 ဆင့်, ဂိမ်းနှုန်းအများဆုံးဆု - 40 ယူရို, ပျမ်းမျှတစ်နာရီကိုအရှုံး - 40 ယူရိုနှင့်ထီပေါက်အများဆုံးအရွယ်အစား - 2500 ။
အတော်များများကဘယ်လိုတကယ်တော့မှန်ကန်သောပြောရှုပ်ထွေးနေဆဲ - ဟော်လန်ဒါမှမဟုတ်နယ်သာလန်, ဤအမည်များအကြားရှိ, မရှိအခြေခံခြားနားချက်ဖြစ်သနည်း အဖြေ - အလွန်ကြီးမားရှိပါတယ်!
နယ်သာလန်နယ်သာလန်၏2ပြည်နယ်များသာ 12 ဟုခေါ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ခေတ်သစ်ရက်ကြာနယ်သာလန်၏ပိုင်နက်အပေါ်ပထမဦးဆုံးအခြေချနေထိုင်မှုပင် 250,000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပေါ်လာတော့တယ်။
ဤရွေ့ကားထို့နောက်ရောမတို့ကသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်အလယ်ခေတ်အတွင်းသန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ရောမအင်ပါယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်သူအမျိုးမျိုးသောဂျာမန်အမျိုးအနွယ်တည်း။ တိုင်းပြည်ရှည်လျားအစောပိုင်း 19th ရာစုအတွင်းကဒီမှာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ရုန်းကန်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်လိမ္မော်ရောင်၏အုပျခြုပျဧကရာဇ်မိသားစုဖြစ်လာခဲ့သည်
1830 ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် 1890 အတွက် seceded နှင့်လူဇင်ဘတ်။ 2013 Willem-Alexander က, လိမ္မော်ရောင်၏မင်းဆက်၏တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ပြည်နယ်၏ခေါင်းပေါ်မှာ, သရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ သူ့ကိုမပြုမီ, 123 နှစ်ပေါင်းသင်တန်းအတွက်, ပလ္လင်တော်မှသာအမျိုးသမီးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဧကရာဇ်ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းသည်သူသည်ချုပ် -Minister ပါလီမန်နှင့်အစိုးရတည်းဖြတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါနယ်သာလန်ဆေးခြောက်များ၏ဥပဒေနှင့်တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အဖြစ်ပြည့်တန်ဆာများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်ကမ္ဘာအနှံ့လူသိများကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနိုင်ငံအတွင်းရှိလောင်းကစားဝိုင်းမှသဘောထားမဟုတ်ဘဲတင်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်လောင်းကစားဝိုင်းထိန်းချုပ်ဘို့တာဝန်ရှိဖြစ်သောဒါခေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရှိ၏။ စုစုပေါင်းကတိုင်းပြည်အနှံ့အဓိကမြို့ကြီးတွေမှာ 14 ရုံးများရှိပါတယ်။ အားလုံးအမြတ်တိုင်းပြည်များ၏ဘဏ္ဍာသို့တိုက်ရိုက်တတ်၏။
အမ်စတာဒမ် - နယ်သာလန်မြို့တော် - ဇိမ်ခံလောင်းကစားရုံ«ဟော်လန်»ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကမြို့ထဲတွင်သာလောင်းကစားရုံဖြစ်ပြီးထို့ကွောငျ့ကလက်ဝါးကြီးအုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ တစ်ဦးခမ်းနားအလင်းနှင့်အတူအဆောက်အဦ«ဟော်လန်»သုံးထပ်။ သငျသညျအနိမ့်လောင်းကြေးမှာကစားနိုင်ပါတယ်မြေညီထပ်တွင်, ဒုတိယအမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးအဘို့ကစားရန် slot နှစ်ခုနှင့်တတိယအထပ်ပရိတ်သတ်တွေပေါ်မှာရှိသမျှမျိုးမြင့်လောင်းကြေးဖဲချပ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြမ်းပြင်မှာသင်ကနှစ်ဦးစလုံးကဒ်ဂိမ်းများနှင့်ကစားတဲ့နှင့် slot နှစ်ခုအမျိုးမျိုးတို့ကိုခံစားနိုင်။
တိုင်းပြည်အတွင်း Poker အထူးဂုဏ်အသရေအတော်ပင် - ကဒီမှာမှန်မှန်ပြိုင်ပွဲ, ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာနှစ်မျိုးလုံးအဆငျ့အိမ်ရှင်အဖြစ်။ ကိုယျတျောနှငျ့သငျသညျအရှယျ 18 နှစ်ပေါင်းရောက်ရှိလာသောအခါမှသာရှိတယ်ကစားနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကကျိန်းသေတစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်လောင်းကစားရုံမှတံခါးနားမှာ။ အဝတ်ပုံစံ - ထိုမင်းသမီးပိုမိုနှစ်သက်ကော့တေးသို့မဟုတ်ညဦးယံအချိန်ဝတ်ရုံများအတွက်ဝတ်စုံနှင့်လည်စည်း။ ဝင်ပေါက်4€အကြောင်းကိုကုန်ကျသည်။
Казиновысможетенайтивследующихгородахအမ်စတာဒမ်, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen က, Leeuwarden, Nijmegen, ရိုတာဒမ်, Scheveningen, Schiphol လေဆိပ်, Utrecht, Valkenburg, Venlo, Zandvoort ။
Van Gogh ပြတိုက်တွင်။ နေရပ်လိပ်စာ: Paulus Potterstraat7။ ဒီနေရာတွင်အနုပညာရှင်၏ဘဝတစ်အချိန်နဲ့တပြေးညီပုံပြင်ကိုရှာဖွေမည်, ပြတိုက်သူနေထိုင်ခဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိရာဓာတ်ခွဲခန်း၏ပါရမီ recreates - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင်အနုပညာရှင်လာသည့်အတွက်လေထုထဲသို့ထိုးဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ခေါ်ဆောင်သွားပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Oudezijds Achterburgwal 54 ။ ဧဒုံအလင်းခရိုင်၏ကျော်ကြားလမ်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်, erotica ၏ပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ ဒီနေရာတွင်ကဒီလမ်းပေါ်များ၏သမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ veshchichek အများကြီးကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြတိုက် Exposition3ကြမ်းပြင်ယူထားသောနှင့်ဝင်ပေါက်သာ 18 ၏အသက်အရွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Rembrandt ပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Jodenbreestraat4။ ပြတိုက်၏ Exposition သူကဒီမှာမိမိဆရာ Pieter Lastman နှင့်ကျောင်းသားများ၏လုပျငနျးအဖြစ်တင်ဆက်အနုပညာရှင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ပန်းချီကားများ၏ master.Pomimo ကျော်ကြားစုဆောင်းခြင်း, နေထိုင်ခဲ့ရှိရာအဆောက်အဦ၌တည်ရှိ၏။ အိမ်တော်ခန်းတစ်ခုမှာ - ထွင်းထု၏အနုပညာထံအပ်နှံပြတိုက်။
အမ်စတာဒမ်တိရစ္ဆာန်ရုံ။ နေရပ်လိပ်စာ: Plantage Kerklaan 38-40 ။ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစုဆောင်းထက်ပို 6,000 မျိုးစိတ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ 1838 အတွက်၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ရာနှစ် - ဒါဟာနယ်သာလန်၏ရှေးအကျဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံဖြစ်ပါတယ်။
5. ခွေးလှေး Market က Waterlooplein ။ Waterlooplein2နေရပ်လိပ်စာ။ ဆေးရုံအမ်စတာဒမ်ပေါ်တက်လမ်းလျှောက်ဖို့မလုံလောက်ခြင်း, အမှတ်တရပစ္စည်းများအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ။ စျေးနှုန်းများကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရွေးချယ်ရေးကွဲပြားခြားနားသည်။
နယ်သာလန်နှင့် golandtsev အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
အစားနယ်သာလန်နယ်သာလန်၏ပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီသူဟာကုန်းတွင်းပိတ် (မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းဟော်လန်၏ဆိုလိုသည်မှာပြည်နယ်) ဖြစ်သည့်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့နှင့်ဤခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုပေတရု၏ရုရှားခရီးစဉ်ကိုလယ်ဗြဲသို့ရောက်လာသော ပြည်နယ်များသူနဲ့တစ်နိုင်ငံလုံး "ခြင်း";
ဟော်လန် - ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ, 184 စင်တီမီတာယောက်ျား, မိန်းမများ၏ပျမ်းမျှအမြင့် - 170;
တိုင်းပြည်အတွင်းစက်ဘီးအရေအတွက်နေထိုင်သူများ၏နံပါတ်ထက်ကျော်လွန်, စက်ဘီးကိုမကြာခဏခိုးယူ, ဒါကြောင့်စက်ဘီးထက်ပိုပြီးစျေးကြီးအများကြီးကုန်ကျတစ်ခါတစ်ရံစက်ဘီးသော့ခတ်လျက်,
ဒိန်ခဲ-ချမှတ်ခြင်း, ပြဒါးသာမိုမီတာ, အဏုနှင့်တယ်လီစကုပ်ကဒီတိုင်းပြည်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်;
ကျောင်းစနစ်အတွက်အကောင်းဆုံးခန့်မှန်း -10 နှင့်အဆိုးဆုံးတဦးတည်း;
ဤနေရာတွင်သူမ၏လုပ်သုပ်နှင့်အတူ herring, အသားညှပ်ပေါင်, pies သို့မဟုတ်သီးခြားစီ စား. , Mayonnaise - အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ။ ဒါဟာပုံမှန်ဟမ်ဘာဂါဒါမှမဟုတ်ပူပြင်းတဲ့ခွေးလိုပဲလမ်းပေါ်မှာအပေါ်ကို kiosk မှာတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစ Mayonnaise နှင့်အတူ kartofel- fries ကိုအလွန် ချစ်. ဖြစ်၏
မကြာခဏမိုးရွာနှင့်တစ်ဦး gusty လေတိုက်မှုတ် - နယ်သာလန်အတွက်မိုးလေဝသကောင်းတစ်ဦးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စကားမစပ်, ရာသီဥတုဒတျချြများ၏ထွက်ခွာသွား၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိဖြစ်လာ;
ဟော်လန်လိမ္မော်အရောင်။ ဒတျချြတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အမညျကနေဘာသာပြန်ချက်အတွက်လိမ္မော်ရောင်၏ "" အိမ်တူသောအသံထားလို့ဖြစ်ပါတယ် "။ "
0.2 ထိပ်တန်း 10 ဒတျချြအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
1 ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးဥရောပအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း 2018:
2 ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း 2019:
2.1 ဟော်လန် - အခြားနိုင်ငံများတွင်ဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသောသောအရာအားလုံးကိုခွင့်ပြုသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ,
2.2 on-line ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံလောင်းကစား - ကဖြစ်သကဲ့သို့ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်
3.1.2 နယ်သာလန်နှင့် golandtsev အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
မန်ဟက်တန် slot အဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ